ComplexCon တွင် ဧရာမ LEGO adidas Originals Superstar ဖိနပ်
06 / 11 / 2021 08 / 11 / 2021 Matt Yeo ပါ 270 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတား, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas Pro ကိုမော်ဒယ်လ်, Adidas စူပါစတား, Lego, Lego Adidas, Lego x Adidas, NBA
ဒီတနင်္ဂနွေ ComplexCon 2021 ဧရာမ ပွဲကို ပြသပါမည်။ Lego adidas Originals Superstar ဖိနပ်။
အဆိုပါပွဲကို ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Long Beach တွင် နှစ်ရက်ကြာကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာရှင်များ၊ ပြခန်းများ၊ အထူးသီးသန့်၊ ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့် ဟောပြောပွဲများကို ဧည့်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
လက်မှတ်ရနိုင်လောက်တဲ့ကံကောင်းသူတွေကတော့ check out လုပ်ချင်ကြပါတယ်။ Lego Booth B6 ဖန်တီးမှုစတူဒီယိုရှိရာ မယုံနိုင်စရာအကောင်းဆုံး ဧရာမအတွဲ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မည်။ Lego adidas မူရင်းစူပါစတားများ။ အလျား 13 ပေ ရှည်သော ဖိနပ်တစ်ရံသည် အုတ်ခဲ 500 ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ရန် နာရီ 150,896 ကြာခဲ့ပြီး p ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။artနှင့်အတူ nership Lego National Hip-Hop သမိုင်းလတွင် စတင်မည့်အဖွဲ့။
Booth သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများသည်လည်း တစ်မျိုးတည်းသော ကံစမ်းမဲများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးများအတွက် Lego 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ Lego adidas မူရင်း Superstar ပြခန်း။ အလားတူ ဧရာမအရွယ်အစား ဖိနပ်တစ်ရံကိုလည်း ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် စင်္ကာပူရှိ စျေးဝယ်စင်တာများတွင် ပြသခဲ့သည်။ လူကြီးများအတွက် Lego 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား.
ပုံရိပ်တွေ: Geek ယဉ်ကျေးမှု
အဆိုပါ Lego အုပ်စု partနေပြည်တော် adidas ထုတ်ဝေမှုနှင့်အတူ ယခုနှစ်တွင် အပြည့်အဝ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ NBA နှင့် ပူးပေါင်း၍ အဝတ်အစားနှင့် သင်တန်းဆရာများ လိုင်းအသစ်, Ultra စုစည်းမှုboost သင်တန်းဆရာ နှင့် လူကြီးများအတွက် Lego 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား.
Zavvi လောလောဆယ် 37% လျှော့ထားတယ်။ လူကြီးများအတွက် Lego 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား £50 အောက်အထိ - အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ သို့ဦးတည်ပါ။ Zavvi ဤထူးခြားသောတည်ဆောက်နိုင်မှုကိုရယူရန် Lego ကန့်သတ်အချိန်အတွက် sneaker ။
← LEGO နှစ်ခုရယူပါ။ Marvel Zavvi တွင် $35 လျှော့စျေးဖြင့် အတွဲတစ်ခုတွင် Eternals အစုံရှိသည်။
Do Eternals ၏ အဆုံးစွန်သော ခရက်ဒစ်ပြကွက်များသည် အနာဂတ် LEGO ဖြစ်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။ Marvel ရုပ်ပုံအသေးစားများ (SPOILER) →